musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Tourism Indasitiri Inoratidzira Mutambo wayo wechina wegore
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Entertainment • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Seychelles inopemberera Zuva reNyika Yekushanya
Zuva reWorld Tourism Day gore rino richapembererwa munzvimbo medu pasi pedingindira rinoti "Kuumba Ramangwana Redu" Munyori Mukuru wezveKushanya, Mai Sherin Francis, vakazivisa mumusangano nevatori venhau wakaitwa neMuvhuro, Gunyana 20, 2021, kuBotanical House. Mutambo uyu unotora vhiki rese uchaitwa kubva muna Gunyana 27, 2021, kusvika Gumiguru 2, 2021. Dingindira rinoti "Kuumba Ramangwana Redu" rakasarudzwa kwete kungorumbidza mupiro wevaya vanoshanda muindastiri asiwo vanhu veSeychelles ne kuenda.
Dingindira rakasarudzwa kurumbidza mupiro wevaya vanoshanda muindasitiri pamwe nevanhu veSychelles nenzvimbo yavari kuenda.
Mutambo weVashanyi uchasanganisira hurukuro negurukota rezveKushanya, kufumurwa kwevanhu vanokudzwa se "Mapiyona Ekushanya."
Vana vachange vachitorawo chikamu pavanobvunzurudza hunhu hwekushanya.
Dingindira rinoti "Kuumba Ramangwana Redu" rakasarudzwa kwete kungoombera mupiro wevaya vanoshanda muindastiri asiwo vanhu ve Secheres uye kwainoenda sezvo Dhipatimendi reKushanya ichienda kunosanganisira nharaunda nematunhu muindasitiri yekushanya. Sangano reUnited Nations World Tourism Organisation (UNWTO) World Tourism Day 'riri kuitwa pasi rose pasi pedingindira rinoti "Tourism for Inclusive Growth."
"Mutambo weVashanyi inguva yakakosha kwatiri sezvo isu tichitora nguva kwete yekungopemberera kutengeserana nekuenda kwedu chete asi nekufungisisa mamiriro emaindasitiri edu," akadaro PS Francis apo aipa karenda yezviitiko zvekucherechedza kushanya kwegore negore. vhiki.
Izvi zvichasanganisira hurukuro yakapihwa negurukota rezveKushanya, Sylvestre Radegonde kuParamende yeNational, kufumurwa kwevanhu vanokudzwa se "Mapiyona Ekushanya," akateedzana ekuonekwa nekukurukurirana pazvirongwa zvakakosha panhepfenyuro, terevhizheni, uye mapuratifomu enhau makiyi maindasitiri manhamba uye kutangwa kwemakwikwi emifananidzo pakati pevamwe. Vana vachange vachitorawo chikamu pavanobvunzurudza hunhu hwekushanya padanho reYouTube dhipatimendi.
Nyowani gore rino chiitiko chekukanganisa muchimiro chechiitiko chekudyara miti, chinozoitwa musi waGumiguru 2, 2021. PS Francis akataura kuti chiitiko ichi chiri kusimbisa kuzvipira kwekuenda kunogadzikana uye nekuedza kwayo kuramba kuri girini nzvimbo. Nhengo dze iyo Seychelles nharaunda inokokwa kutsigira chiitiko ichi kure mukati memasangano nenzvimbo dzakasarudzika nekudyara muti.
PS Francis akataura kudemba kwake kuti nekuda kwemamiriro ezvinhu ari kuramba aripo nedenda iri, veruzhinji havazokwanise kutora chikamu pamunhu pazviitiko izvi, uye zviitiko zvichave nekukoka chete nevatori vechikamu vashoma kana kuitirwa online.
“Takatapudza mabasa edu maererano nehutano hwevanhu hwavepo. Kunyangwe paine zvirambidzo, takagutsikana kuti zviitiko zvedu zvinoratidza zviitiko zvedzidzo zvekubata vechidiki vedu uye zviitiko zvakagadzikana kuti tirambe tichiedza kuchengetedza nzvimbo yekuenda iri girini, ”Mai Francis vakadaro.
Veruzhinji vachakwanisa kunakidzwa vari kure nezvimwe zviitiko zvinosanganisira nhaurirano yepaneru uye iyo Makwikwi eExpression Orale nevana vechikoro sezvo zviitiko zvichange zvichitepfenyurwa kana kutepfenyurwa. Nedzimwe shanduko diki kune chiitiko, chikafu fiesta chichaiswa pachirongwa zvakare gore rino sevashandi vekushanya vanozotambira zviitiko zvavo nzvimbo.
Mutambo wegore negore weVashanyi mutambo wekuwedzera kweWorld Tourism Day yegore negore inopembererwa musi waGunyana 27 uye yakatangwa neWorld Tourism Organisation (UNWTO).